दयालाई निश्चलको प्रश्न 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी' ले कति कमायो ?
प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक ०१, २०७६१०:३८
फिल्म । कबड्डीको पहिलो र दोस्रो सिरिज बस्नेत निर्माताको रुपमा थिए । पहिलो भाग निर्माण हुँदै गर्दा निश्चलले सघाएका थिए । ‘मण्डलाकै शैलीमा फिल्म बनाउन’ निश्चलले नै दया र निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई सुझाएका थिए । कबड्डी पहिलो भागबाट नै ब्राण्ड बनेता पनि यसको तेस्रो भाग ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सम्म आइपुग्दा निश्चल र उनको व्यानर ब्ल्याकहर्स पिक्चर्स एसोसियट छैन ।
यद्दपी दया र निश्चलको सम्बन्धमा भने दुरी नबढेको भर्खरै सार्वजनिक एक भिडियो हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय ‘घामड शेरे’ को प्रमोसनमा रहेका निश्चल र उनको टिमसंग कुराकानी गर्ने क्रममा एक प्रसँगमा दयालाई निश्चलले सोध्छन , कबड्डी कबड्डी कबड्डीले कति कमायो ? पछिल्लो समय राम्रो व्यापार गरिरहेको फिल्मको बारेमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । तर , निश्चलको प्रश्नमा दयाले भने उत्तर दिन सक्दैनन् । अक्मकिदै दयाले जवाफ फर्काउन सक्दैनन् । त्यसपछि निश्चलले नै भन्छन् ‘हिसाब गर्न औलानै भाच्नु पर्ने हो ?’
निश्चल सिरिजबाट बाहिरीए पनि उनलाई व्यापारको चासो भने अझै छ । रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्ममा दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा शाक्य, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, माओत्से गुरुङ, विजय बराल, रिश्मा गुरुङ, कमलमणी नेपाल, अरुणा कार्कीलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । स्वजातिय विवाह र अन्तर्जातिय प्रेम सम्बन्धको अन्तरद्वन्द्वको कथा वाचन गर्ने फिल्मको कथा निर्देशक निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले तयार पारेका हुन् ।
राजेशको स्वरमा ‘रङ्गियो रे सिउँदो’ (भिडियो)